Maalinta: Ogast 16, 2018
Maalintii ugu horeysay ee 2 ee gaadiidka Tolu ee Denizli oo bilaash ah
Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, oo qaaday taxaddarradii loo sameeyey Ciidul Adxaa awgeed, waxay basaskii degmadu lacag la’aan ka dhigtay maalinta u horreysa ee maalinta 2 inta lagu gudajiro xafladda si looga hor-tago muwaadiniinta inay ku adkaato booqashada qabuuraha, ehelka iyo asxaabta. Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli, Muwaadiniin [More ...]
Dhaqanka ee Trabzon
Dawlada Hoose ee Trabzon, Fasaxyada caanka ee ka madax banaan basaska dawladaha ee arjigan ayaa sii socon doona sanadkan. Dawlada hoose ee Magaaladu waxay muwaadiniinta ku qaadi doontaa si lacag la’aan ah khadadka oo dhan inta lagu guda jiro xafladda. Basaska dadweynaha ee gaarka ah [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalaada Adana waxay abaabuli doontaa adeegyo basas lacag la’aan ah qabuuraha inta ka horaysa maalinta, waxay ku sii wadi doontaa adeegga gaadiidka dadweynaha lacag la’aan inta lagu jiro fasaxa waxayna adeeg bilaash ah ku bixin doontaa meelaha gawraca lagu iibiyo. Nabadda iyo aaminaadda Ciidul Adxaa ee Adana [More ...]
50 Kharashka Gaadiidka Dadweynaha ee Antalya
Baasaboorada rasmiga ah ee taarikada gawaarida Antalya ee Dawlada Hoose, Antray iyo taraafikada nostalgic ee 50 boqolkiiba ee muwaadiniintu waxay ku qaadan doonaan qiimo dhimis iidda. Muwaadiniinta Dowlada Hoose ee Magaalada Antalya ee gaadiidka dadweynaha si loo hubiyo in dadku si fudud u fulin karaan dhaqanka diyaarinta [More ...]
MUTTAŞ iyo ÖTTA Passing 100 Solid Passenger of Muğla Dadka
Dawlada Hoose ee Magaalada Mupolla, MUTTAŞ iyo Gaadiidka Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay (ÖTTA) Kadib Isbadalka Dönüşüm ee mashruuca sonrası Gaadiidka, 100 Milyan 85 kun 610 ayaa sidday rakaab dhan gobolka ilaa maanta. Sida uu farayo sharciga magaalo-weynta [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha Konya Maalinta 2 ee Ugu Horeeya ee Bilaashka ah
Duqa Magaalada Konya ee caasimada Ugur Ibrahim Altay, muwaadiniinta Ciidul Adxaa si nabdoon oo dhibaato la’aan ah ayaa qaadi kara tillaabooyinka loo baahan yahay, ayuu yidhi. Altay, dhammaan meelaha baabuurta la dhigto ee magaalooyinka waaweyn ka hor maalinta Sabtida, [More ...]
Halkalı Muratli Inta u dhaxeysa Culvert maintenance and Stone Wall waxay ka shaqeeyaan shaqada dhismaha
Xafiiska Xidhiidhka Tareenka 14 Halkalı Muratlı Inta udhaxeysa Dayactirka Wadvert iyo Stone Stone Shaqooyinka Dhismaha Qaanuunka 2018 / 377354 GCC wuxuu xadidayaa qiimaha Agaasinka Guud ee Wadooyinka Tareenka ee Turkiga (TCDD) [More ...]
Metro Istanbul waa 30 Years Old!
Metro Istanbul, 30, waxay safkeeda ku bilaabatay 16 bishii Agoosto, 1988 sano ka hor waxayna sii wadaa inay ku koraan in kabadan 2 milyan oo rakaab ah iyo shaqaalaha 2.700. Nidaamka tareenka ee safarka sanadlaha ah ee 'Metro Istanbul' ee 30 [More ...]
54 Thousand Capacity Capacity Tareenka ee Festival Festival
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, “Ciidul Adxaa fasaxa ka dib maalinta 9 waxay aadi doonaan magaaladoodii oo waxay aadi doonaan fasax sababtoo ah xooga laga dareemayo dhulka, badda, hawada iyo jidadka tareenka [More ...]
Heshiiska Wadajirka ee BUDO Joy
34, oo ay ku jiraan shaqaale 1 ah oo ka shaqeeya Bursa Sea Buses (BUDO) oo ay maamusho BURULAŞ, oo ah shirkad hoos timaada Dawlada Hoose ee Bursa. muddada heshiiska shaqada ee wadajirka ah ayaa la saxeexay. 'Union of Turkey la BURULAŞ (Marine Workers' badmaaxyada Midowga) kala saxiixday [More ...]
50 waxaa lagu dhimi karaa gaadiidka dadweynaha ee Bursa
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktas, 4 ee Ciidul Adxaa waxaa laga dhimayaa boqolkiiba 50 ee gaadiidka dadweynaha inta lagu jiro maalinta, isagoo laba jibaaraya xamaasadda ay u qabaan iidaynta muwaadiniinta. 'Magaalo aad u wanaagsan oo la heli karo' [More ...]
Muwaadiniinta Muwaadiniinta BUDO
Sumcadda Bursa ee BUDO'nun Mudanya Pier ee adeegga adeegga daciifnimada adeegga muwaadiniintu way kacday. Qofka deggan magaalada Guzelyali Zeki Saygi, oo ku nool Mudanya oo badiyaa u raacda Istanbul markab [More ...]
Gaadiidka bilaashka ah ee loogu talagalay xabsiyada Bayramda City ee magaalada Bursa
Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa waxay qaadday taxaddar kasta oo lagama maarmaanka u ah muwaadiniinta si ay ugu noolaadaan Ciidda Ciidda, jawi deggan, nabad iyo amaan ah. 1 waa horudhaca iiddii Bursa. 2. 3. iyo 4. maalmood [More ...]
Bandhiga Cusub ee BursaRay wuxuu ku yaalaa Rails
BursaRay, oo ay maamusho BURULAŞ, waxay door muhiim ah ku leedahay gaadiidka dadweynaha. Thanks to nidaamka tareenka, kumanaan dad ah ayaa gaari kara xadka bari ee magaalada si habsami iyo deg deg ah. Inbadan oo adeeggan ah [More ...]